N'ogbe Tylosin Tartrate Bolus 600mg Manufacturer and Supplier | Junyu Pharm
Maka nje Gram na nje mycoplasma dika.
Ihe eji arụ ọrụ: mbadamba nkume ọ bụla nwere Tylosin tartrate nke ya na tylosin 600mg
Mbadamba mbadamba na-acha odo odo
Dị ka ọgwụ nje ndị ọzọ nke macrolide, tylosin na-egbochi nje bacteria site na ijikọta 50S ribosome na igbochi njikọ protein.Spectrum nke ọrụ na-ejedebe na gram-positive aerobic bacteria.Clostridium na Campylobacter na-enwekarị mmetụta ọsọ ọsọ. n'ime ezì, lawsonia intracellularis dị ike.
Ehi, aturu, ewu, ezi na okuko.
Maka nje Gram na nje mycoplasma dika
Ọkụkọ na-arịa ọrịa iku ume na-adịghị ala ala, ọrịa rhinitis na-efe efe, ezì mycoplasma pneumoniae, ogbu na nkwonkwo, ọ na-ejikwa pigs pneumoniae na ọnyụnyụ ọbara na-akpata pasteurella na ọnyụnyụ ọbara kpatara treponema
site nchịkwa ọnụ
Ehi, atụrụ, ewu na ezì: otu mbadamba / 30-60kg ahụ dị arọ, 10-20mg / kg arọ ahụ.
Okuko: otu mbadamba / 12kg arọ ahụ 50mg / kg arọ ahụ
Warningdọ aka na ntị pụrụ iche
Agaghị eji ya na ụmụ anụmanụ
Agaghị eji ya
Mmeghachi omume na-adịghị mma (ugboro ole)
Tylosin nwere ike ibute afọ ọsịsa na anụmanụ ụfọdụ. Achọpụtala mmeghachi ahụ na ezì
Nlekọta maka ịnyịnya abụwo ihe na-egbu egbu
Ekwesighi iji ya na ndi ozo macrolides.comnyere β-lactams
A ga-akpọtụrụ onye na-agwọ ọrịa anụmanụ ozugbo ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla gbasara mgbaàmà na-eme ma ọ bụ ma ọ bụrụ na a na-enyo oke ọgwụ.
Ehi, aturu na ewu: 21days
Nchekwa: Chekwaa n'okpuru 30 ℃, jigide ebe akọrọ, chebe ya na ihe ndị siri ike
Ngwugwu: 4bolus / ọnya 10 ọnya / igbe
Nzukọ anyị na-elekwasị anya na atụmatụ atụmatụ. Afọ ojuju ndị ahịa bụ mgbasa ozi anyị kasịnụ. Anyị na-enwetakwa OEM na-eweta maka Ahịa Dị ọnụ ala China Tylosin Bolus, Anyị ji aka anyị kwenyesie ike na anyị ga-eweta azịza kachasị mma na ọnụahịa resonable, nkwado dị oke egwu mgbe ahịa gachara maka ndị ahịa. Anyị ga-azụlite ọdịnihu na-enwu gbaa.
Ọnụ ala dị ọnụ ala China Tylosin Tartrate Bolus, Tylosin Tartrate Bolus 600mg, Na ebumnuche nke "ntụpọ efu". Iji lekọta gburugburu ebe obibi, na nloghachi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, lekọta onye ọrụ ọrụ mmekọrịta dị ka ọrụ nke ya. Anyi na anabata ndi enyi si na uwa niile ka ha bia duzie anyi maka anyi ga emezu mmeri.
Nke gara aga: Tetramisole HCL Bolus
Osote: Glutaraldehyde Ngwọta
Oxytetracycline hydrochloride mbadamba nkume maka ụmụ anụmanụ
Oxytetracycline Hydrochloride Vet Mbadamba
Oxytetracycline Mbadamba anụmanụ
Nutrition EGG Super WSP Vitamin Mmiri soluble P ...